Akwụkwọ edemede sitere na Planeta de Libros | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Carmen Guillen | | Akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ
Amaara m ihe ị na-enwe mmasị na akụkọ edemede, ọkachasị akụkọ, yabụ echere m na ọ dabara adaba na ị nwere ike nwee mmasị na edemede a ebe m na-achịkọta ụfọdụ Akwụkwọ edemede sitere na Planeta de Libros. Enwere ezigbo ihe bara nnukwu uru, yabụ enwere m olile anya na ọ masịrị gị. M ga ahapuru gi aha na nchịkọta nke obula.
1 "Ndị rọrọ nrọ" (Elio Quiroga)
2 "Afọ abụọ, ọnwa asatọ na abalị iri abụọ na asatọ" (Salma Rushdie)
3 "Osimiri nke Wolf" (Olivier Truc)
4 "Gbọchị Dog" (Gilles Legardinier)
"Ndị nrọ" (Elio Quiroga)
Bọchị nbipụta: 06/10/2015
Nchịkọta: Onyinye Minotauro
Dante bi n'otu ụlọ dị na mba ahụ, nke oke ọhịa na agwa na-adịghị mma gbara ya gburugburu, n'otu ebe ebe ihe niile dị ka ihe na-adịghị mma ma dị n'usoro. Ma ọ dịghị ihe ọ bụla dị ka ọ dị na ndụ ya, nke ga-abanye vortex a na-apụghị ịgbanwe agbanwe mgbe ọ hụrụ onwe ya n'etiti ala ịkpa ahụ. Dante ga-eche na isi agbafuola ya. Mana eziokwu dị oke egwu: Dante abụghị Dante, ọ bụ ezie na ọ bụ n'ezie. O nwekwara ọtụtụ akwụkwọ ego pụtara ìhè iji dozie.
N'ihi ya, anyị ga-ahụ ndị edemede dị ka Caín Gray, enyi ochie nke Dante, ma ọ bụ Boss Pérez, eze nke ifo nke hapụrụ ụmụ mmadụ ya, na karịsịa Lara, nwanyị hụrụ Dante n'anya ma ọ hụghị ya n'anya. . Na njedebe na Dana, onye nwụrụ kemgbe ọtụtụ afọ, agbanyeghị na ọ bụghị kpam kpam.
Gburugburu Dante, Lara na Dana, ụwa niile na-ada ada n'ọgụ agha na-enweghị ngwụcha, obi ọjọọ na nke kpuru ìsì, ọtụtụ mmadụ wepụtara igbu onwe ha suicide ịdị ndụ ruo mgbe ebighị ebi.
Na Dante ...
Dante na-ata ụta maka ihe niile na-eme.
"Afọ abụọ, ọnwa asatọ na abalị iri abụọ na asatọ" (Salma Rushdie)
Ngosi: Rustic with flaps
Gbasara mkpokọta: Formentor Library
Onye ntụgharị okwu: Javier Calvo
Nke a bụ akwụkwọ na-adọrọ adọrọ nke na-agwakọta akụkọ ihe mere eme, akụkọ ifo na ịhụnanya ebighi ebi, akụkọ dị ukwuu nke na-egosi nnukwu anụ ndị a tọhapụrụ mgbe ihe kpatara ha nyefere na ịnụ ọkụ n'obi na-achị.
N'ọdịnihu dị nso, mgbe oke mmiri ozuzo gasịrị, oge nke Strangeness na-amalite. Onye ọrụ ubi chọpụtara na ụkwụ ya agaghịzikwa emetụ n’ala. Onye na-ese ihe nkiri na-aghọ dike. Nwa ọhụrụ na-amata onye rụrụ arụ site n’ịkpọ ahịhịa akpụkpọ emee ka mmadụ mata onye na-adịghị ọcha. Ha amaghi na ha sitere na ndi anakpo anwansi na ndi anwansi a maara dika ndi mmuo. Ekpu ya kewapụrụ ụwa ya na nke anyị. Ugbua mkpuchi a agbajiri ma ndị ahọpụtara ga-alụ ọgụ n’etiti ọkụ na ọchịchịrị nke ga-adịru afọ abụọ, ọnwa asatọ na abalị iri abụọ na asatọ, ya bụ, otu puku abalị na otu.
Salman Rushdie edeela ezigbo akwụkwọ, akụkọ ọgbara ọhụrụ banyere oke esemokwu nke mmadụ, na ịgba akaebe na-enweghị mgbe ọ bụla banyere ike akụkọ. Mgbe Rushdie gbusịrị ọtụtụ nde ndị na-agụ akwụkwọ na The Satanic Verses and Sons of Midnight, ọ laghachiri na akwụkwọ ọgụgụ mara mma nke na-akwado ọnọdụ ya dị elu na ebe ịchụàjà nke akwụkwọ ụwa.
"Uhie nke Wolf" (Olivier Truc) Nnọọ
Nchịkọta: Áncora & Delfín
Onye ntụgharị okwu: Joan Riambau Möller
N’otu obere obodo dị na mgbago mgbago ugwu Lapland, ọnwụ nke onye na-azụ anụ na-agagharị agagharị na-ekpughere ọtụtụ ihe mmanụ gbara ọchịchịrị ga-agbanwe, ruo mgbe ebighị ebi, akara aka nke ndị bi na ya. Klemet Nango na Nina Nansen weghaara nyocha nke ghọrọ ihe omume mgbasa ozi mgbe achọtara onye isi obodo ahụ nwụrụ na saịtị dị nsọ nye ndị agbụrụ Sami dị obere. Revebọ ọbọ, ọdịmma akụ na ụba, esemokwu agbụrụ nke narị afọ gara aga na ọgba aghara na-aga ụkwụ na ụkwụ na thriller nke na-aga n'akụkụ ndị dịpụrụ adịpụ nke Arctic Circle.
"Gbọchị Dog" (Gilles Legardinier)
Mkpokọta: Planet International
Onye ntụgharị okwu: Juan Camargo
N’ịbụ onye ike gwụrụ ibi n’ụwa ebe ọ na-enweghị ike ịchọta ebe ọ nọ, na-enwekwa mwute maka ọnwụ nke ndị ọ hụrụ n’anya kacha nso, ọgaranya Andrew Blake kpebiri ịgbanwe ndụ ya wee pụọ. N'ihi ya, ụbọchị a ga-enye ya ihe nrite ahụ maka Ọkachasị Ọrụ, ebe ọ bụ na ọrụ ya niile dị ka ọchụnta ego, ọ hapụrụ obodo ya bụ London wee gaa ime obodo France… ịrụ ọrụ dị ka onye na-egbu ihe! Mgbe ọ bịarutere na Beauvillier, ọ ghọtara ozugbo na ụlọ ahụ tụfuru mkpụrụ obi ọ nweburu ...
N'ime ndị bi na ya bụ Nathalie, onye nlekọta di ya nwụrụ na Odile nwere usoro nhazi na mkpa dị iche iche; onye na-atamu ntamu; Manon, nwa agboghobia nke na amaghi ihe ochoro, ya na Philippe, onye nche ubi na aka nri onye bi na obere ulo di n’ubi a wee luso onye obula agha ... Mmekorita di n’etiti onye obula n’agha, juputara na nghota ọnọdụ na-enweghị isi, ya mere Andrew enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịnwa ịhazi ụlọ ọgbaghara a n'usoro ... Oh, ma bụrụ enyi Méphisto, pusi Odile!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ akụkọ » Akwụkwọ edemede sitere na Planeta de Libros